40 Guusha Salaadda ee Nolosha | MADAXWAYNAHA ADDUUNKA
Bogga ugu weyn Dhibcaha salaadda 40 Salaad Guusha Nolosha
40 Salaad Guusha Nolosha
Sida ku xusan buugga 3 Yooxanaa 1: 2, waxaan aragnaa in rabitaanka ugu weyn ee Eebbe u leeyahay carruurtiisa oo dhan ay tahay inaan ku guuleysanno dhammaan dhinacyada nolosheena. Tani waa bayaan run ah, laakiin nasiibdarro dad badan oo rumaystayaal ah ayaa ka fog guul, Masiixiyiin badan ayaa maanta ku nool nolol dhib badan, qaar badan ayaa xitaa la yaaban haddii ay tahay doonista Eebbe ee iyaga ku silcinaysa nolosha. Ilmaha Illaahow, Eebbe wuxuu doonayaa waxkasta oo adiga iyo anigu aan nolosha ku guuleysanayno, ujeedkiisa ugu dambeysa ee annaga noo ah waa inaan helno guul wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, Ibliisku dhinaca kale wuxuu had iyo goor la tartami doonaa dhaxalkayaga Masiixa ku jira. In kasta oo ay jiraan sababo badan oo dadku ay ugu fashilmaan nolosha, sheydaanka ayaa ah sababaha koowaad, adiga iyo aniga si aan nolosha ugu guuleysano waa inaan dagaallada iimaanka ka hor tagno oo aan shaydaanka iska hor taagnaa meesha allabariga ee salaadda. Maanta waxaan noqon doonaa kaqaybqaadashada 40 duco si guul nolosha. Shaqada adag waa wanaagsan tahay, shaqo abuurku xitaa waa weyn yahay, laakiin shaqada ruuxiga ah ayaa ugu dambeysa.
Waa inaan baranaa sida aan ugu wada dadaalno gacmahayaga xagga tukashada salaadda. Ha noqon sida nacasnimada hodanka ah ee u maleeyay inuu ka dhigi karo Ilaah la'aantiisa. Waa inaan baranaa sida loo tukado marwalba arrimaha quseeya nolosheena, hadii aad tahay nin ganacsade ah, waa inaad barataa inaad had iyo jeer ka barido meheraddaada inaad ka ilaaliso duullaanka shaydaanka, waxaad ku sameyneysaa salaadda. Sidaad tukashadan uga qaybqaadanaysid guusha nolosha maanta, waxaan kuu arkaa inaad ku guulaysatay cadaawayaashaada dhexdooda magaca Ciise.
1. Waxaan cadeynayaa in barakooyinkeyga oo dhan ee xabaalaha lagu xiro, ay ku soo baxaan, magaca Ciise.
2. Ducadayda waxaan ka sii daayaa gacaliyahayga dhintay, magaca Ciise.
3. barakadaydii waan ka tuuray gacmaha cadaawaha dhintay oo dhan, magaca Ciise.
4. Waan karaameynayaa aasitaan kasta oo sixir ah, magaca Ciise.
5. Sidii xabaashu u joojin kari weyday ciise, xoog ma joojin doono mucjisooyinkayga, magaca ciise.
6. Wixii weyneeya ee iga hor joogsada, hadda ku bixi magaca Ciise.
7. Wax alla wixii aniga lagugu sameeyo aniga oo adeegsanaya dhulka waa in laga takooro magaca Ciise.
8. Saaxiib kasta oo aan saaxiibbo ahayn, ha ku dhex jiro, magaca Ciise.
9. Wax kasta oo magacayga ku matalaya adduunka ruuxa, waan kaa saarayaa, magaca Ciise.
10. Dhamaan xeradii cadaawayaashayda, isku wareerso magaca Ciise.
11. Rabbiyow, noloshayda ku xoojiso awoodaada jinni kasta, magaca Ciise.
12. Rabbiyow, wixii aan macquul ahayn oo dhan ha bilaabaan inay ii suurta galaan qayb kasta oo noloshayda ka mid ah, magaca Ciise.
13. Eebow i qaado meesha aan ahay meesha aad rabto inaad igu ahaato.
14. Sayidow, bal jid ii dhig meel aan jid lahayn
15. Sayidow, i sii awood aan ku rumeeyo, ku guuleysto oo nolosha barwaaqo ku gaadho magaca Ciise.
16. Sayidow, waa inaad igu jebisaa qayb kasta oo noloshayda ah, magaca Ciise.
17. Sayidow, iiga dhigo inaan ku dhex dhigo mucjisooyin yaab badan dhammaan qaybaha noloshayda, oo ah magaca Ciise.
18. Sayidow, iga dhig si aan uga tago caqabadaha kasta oo aan ku socdo si aan horumar ugu gaaro nolosha, magaca Ciise.
19. Sayidow, igu hoggaami runta, Iyo cibaadada iyo aaminnimadaada.
20. Sayidow, shaqadayda ku dar, magaca Ciise.
21. Sayidow, shaqadayda ku dar magaca Ciise.
22. Sayidow shaqadayda wax ku kordhi, magaca Ciise.
23. Sayidow, naftayda kor u qaad oo xafido magaca Ciise.
24. Waan diidanahay qorshayaasha iyo ajandaha cadawga noloshayda, ee magaca Ciise.
25. Waan diidanahay meelaynta iyo hubka cadowga ee noloshayda, magaca Ciise.
26. Hub kasta iyo shar kasta oo la igu hindistaa, gebi ahaanba way ku fashilmaan, magaca Ciise.
27. Waan diidanahay geerida aan horay u dhicin, magaca Ciise.
28. Waan diidanahay riyada kediska ah, magaca Ciise.
29. Waan diidanahay qallalkeyga markaan la socdo Ilaah, magaca Ciise.
30. Waan diidanahay deynta maaliyadeed, magaca Ciise.
31. Waxaan diidayaa la'aanta iyo abaarta noloshayda, magaca Ciise.
32. Waan diidayaa shilalka jireed iyo kuwa ruuxiga ah markaan galo iyo ku soo baxo magaca Ciise.
33. Waan ka diidanahay jirkeyga, naftayda iyo jirkeyga, magaca Ciise.
34. Waan kasoo horjeedaa camalkasta oo shar ah oo noloshayda ah, oo magaca Ciise.
35. Waxaan ka adkaaday jahwareerka itaal darida iyo weerar kasta oo cadowga, magaca Ciise.
36. Waxaan amrayaa furiin ruuxi ah oo dhexmara aniga iyo awood kasta oo mugdi ah, magaca Ciise.
37. Sun kasta iyo falaarta cadawga, dhex dhexaad ka noqo, magaca Ciise.
38. Naftayda waxaan ku jabiyaa harqood-la’aanta ah noloshayda dhexdeeda, magaca Ciise.
39. Waan baajinayaa qorshayaasha iyo sumadda nolosha magaca Ciise.
40. Rabbi Ciise, jebi dhammaan xiriirrada hidde ee waxyeellada leh noloshayda, magaca Ciise.
Waad ku mahadsan tahay Ciise ducooyinka looga jawaabey magaca Ciise
article Previous100 duco oo loogu talagalay dhicista halista ah
Next article20 Qodobbada Salaadda oo looga soo horjeedo Cadaadiska Ibliiska
Saintmeet Janaayo 23, 2020 saacadu markay tahay 5:41 pm
Dhibcaha salaadda wanaagsan. Sii wad! Waxaan hadda bilownay goobta kulanka kiristaanka, oo ay tahay inaad hubiso. Waxaa loo yaqaan saintmeet.com.
chibueze evarlistus ogbonnaya Mee 11, 2020 XXX: 5 pm
Dhawaan salaadahan waxaan idhi hada waa inaan badalaa sheekadayda kuqoran magaca Ciise aamiin
Anna Wilfred Meey 30, 2020 saacaddu markay ahayd 11:25
Aamiin 🙏🙏🙏🙏 Mahadsanid Ciise
lawrence oo laga keenay jasiiradda Fiji Meey 31, 2020 saacaddu markay ahayd 7:04
Stephen makina Juun 4, 2020 Markay tahay 6:43 pm
Tukashadani wax badan ayey ka bedeshaa noloshayda magaca Ciise Masiix
Stephen makina Juun 4, 2020 Markay tahay 7:25 pm
Ameeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen waan ka helay, magaca ciise masiix, kadib markaan aqriyo baryahan salaada barakeysan n nolosheyda waa in la badelaa magaca ciise masiix
Waa kelvin Juun 30, 2020 X XXX: 11 am
Waxaan rumeysanahay in wax walba ay suuragal u yihiin Ilaah, nimcadiisana aan ahay nin guuleystay IjN amen 🙏
Stephen Ifedayo Luulyo 24, 2020 saacadu markay ahayd 2:26 am
Waad ku mahadsan tahay Ciise inuu ka jawaabo baryadayda .. Ka dhig mid noloshayda ku habboon waxaan amar ku bixinayaa inaad ii ducayso anigana iigu ducee magaca Ciise waan tukanayaa…. Aamiin
John Momoh Agoosto 14, 2020 X XXX: 7 am
Waan ku faraxsanahay inaan helo degelkan. Ilaahay ha barakeeyo xubnahan.
Oladunjoye Oluwaseun Oktoobar 5, 2020 4: 32 am
Waan ku faraxsanahay inaad heshay boggan waxaanan ku duceynayaa inuu Ilaahay ka jawaabo baryadayda
Akintoye Adejoke Sebtember 19, 2020 Saacaddu markay ahayd 1:27 am
Amennnnnnnnnnnnnnnnnnnn prayers baryadayda waxaa laygu ajiibaa magaca ciise..Amennnnnnn… mahadsanid aabbo
Kayode Oktoobar 27, 2020 saacadu markay tahay 10:33 pm
Waan ka helay aniga iyo asxaabteyda qoyskeyga waxaanan si wanaagsan ugu kalsoonahay magaca weyn ee Ciise aamiin
Hantidhawrka Nofeembar 23, 2020 saacadu markay tahay 12:43 pm
Waxaan kulligood ku helay iyaga oo rumaysad leh aniga, qoyskayga iyo asxaabteyda magaca weyn ee Ciise Aamiin
Ihuoma kingwill Febraayo 6, 2021 Markay tahay 2:46 am
Nimcada Eebbe ha ku sii wado ducadan noloshayda. Magaca Ciise. aamiin Mahadsanid
Livinus Etchu Juun 5, 2021 Markay tahay 6:55 pm
Waan sheeganayaa, Rabbi Ciise ha ku siiyo mucjisooyinkiisa iyo awoodiisa inaad u shaqeyso rumaystayaasha.
Chube Carine Luulyo 2, 2021 saacadu markay ahayd 7:20 am
Qodobbada salaadda ee xoogga leh
Rowland Ekechukwu Sebtember 17, 2021 Saacaddu markay ahayd 4:00 am
Waxaa la ii dhiibay magaca Ciise. Aamiin
Salaadda Kahortaga Riyooyinka Xun Inta Uurka Lagu Jiro
PSALM 103 macnaha aayadda aayadda
Qodobbada Salaadda Si Loogu Duceeyo Gaari Cusub
Ducada Ilaalinta Eebbe ee 2021